Ighaghachi Ikuku Ikuku
N’ụlọ akpa ikuku, ikuku ruru unyi na-esi n’ime na-aga, nke mere na uzuzu na-anakọta n’ime akpa nzacha. Akpa nhicha ahụ bụ tubular, mepee na ala ma jikọọ na mpempe tube. A na-akwado ha site n'elu site na mmiri nkwuputa mmiri ma ọ bụ J-bolt. The gas eruba na-nwesịrị na-ebute nyo akpa nhicha. A na-agbanye mgbanaka mgbochi ịda na mpụga nke akpa na nkwụsị ụkwụ 3 ruo 4 iji gbochie ọdịda nke akpa n'oge nhicha ikuku. A na-ehichapụ akpa nzacha otu ogige n'otu oge na ọnọdụ ntanetị.
Ahụkarị Reverse Air Myọcha Bag erughị ala
50 n'arọ. (Polyester)
75 n'arọ. (Faiba glaasi)
Igha Faiba glaasi nyo akpa
Agbara faiba glaasi nyo akpa-ejikarị 450gsm ka 550gsm faiba glaasi filer ákwà.
Akụkụ ndị metụtara ya bụ:
Uyo akpa nyo
Myọcha akpa venturi
Myọcha akpa yinye
Myọcha akpa nko